China Tsika Die-Cheka Pepa Makadhi Ane Kurembera Makomba Manufacture uye Fekitori |SIUMAI
Custom Die-Cheka Mapepa Makadhi Ane Maburi Anorembera
Kugadzirwa kwemakadhi emapepa inzira inodhura kwazvo yekuratidzira.Kazhinji, tinokurudzira uremu uye chimiro chekadhi yepepa zvichienderana nehuremu hwechigadzirwa uye nzira yekuratidzira.Mapepa makadhi ane ushamwari zvakatipoteredza kupfuura PVC zvinhu makadhi.Mari yekugadzira yekadhi yepepa yakaderera uye kugadzirwa kuri nyore.Inogamuchirwa zvakafara uye inoshandiswa nemarudzi ese ehupenyu.Isu tinowanzo kushandisa grey board paper, white cardboard, kraft paper, etc. pakugadzira.Vatengi vazhinji vanoda kuti zvigadzirwa zviratidzirwe zvakananga, saka isu tinowanzo kugadzira blister mapepa makadhi.Blister oiri inoshandiswa kupisa chisimbiso che blister shells uye makadhi emapepa.Mushure mokunge bepa rakaputirwa nemafuta e-blister, rinogona kuvharwa nekupisa ne-high-frequency machine.Blister oiri yakakamurwa kuita PET uye PVC blister mafuta.Pabepa rekuvhara kupisa, PVC kupisa chisimbiso inogona kushandiswa.Izvi zvinogona kubatsira kuchengetedza chigadzirwa, uye zvinogona kuve zvakanyanya intuitive kune vatengi kuona chigadzirwa.Kuzadzisa chinangwa chekukwezva vatengi nekungotarisa.
MOQ Kazhinji 10000 pcs, Ndokumbira utumire email kune chaiyo huwandu
Muna 2002, takadhinda zvinyorwa zvekugadzira uye zvinyorwa.Uye akatanga kuyedza kugadzirwa kwemabhokisi ane corrugated.
Nokufamba kwenguva, takaedza nzira dzakasiyana-siyana dzekugadzira uye nzira.Kubva pakudhinda skrini kusvika pakutenga michina yekudhinda ine mavara mana kusvika kumichina yekuprinda yeUV.Kubva pane imwe otomatiki folda gluer kune mana folda gluers.Isu tanga tichikura munzira yese, uye zvishoma nezvishoma takavandudza goho redu gore rega rega.
Isu takagadzira iyo brand SIUMAI kurongedza, tichitarisira kupa pasirese mhando yepamusoro uye yakanyanya hushamwari kurongedza kuburikidza nehunyanzvi hwedu hwekugadzira tekinoroji.
Isu takawedzera yedu yemhando yedhipatimendi rekuongorora kuti ive nechokwadi chekuti chinongedzo chese chinoongororwa uye nekuongororwa.Kuti tive nechokwadi chekuti kutumira hakuna mhosva, isina tsvina, uye isingaenzaniswi mune zvakadzama, isu tinosimbirira pakushandisa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa kugadzira iyo yakanyanya kunaka kurongedza.
Zvinhu zvemhando yepamusoro, zvichiratidza zvemhando yepamusoro
Sarudza pepa rakakosha remhando yepamusoro, pepa rakasimba, mitsetse yakajeka, chigadzirwa chakapedzwa chakanakisa, uye mamiriro epamusoro-soro.
Hunyanzvi hwemhando yepamusoro, kudhinda kwakanaka
SIUMAI kurongedza ine hupfumi hwekugadzirisa ruzivo, anopfuura makore makumi maviri echiitiko chekugadzira uye akapfuma ekudhinda masters, kuperekedza zvigadzirwa zvako.
Kuti tive nechokwadi chemhando uye kushanda kwezvigadzirwa zvevatengi vedu, tinosuma michina yemhando yepamusoro kuti unzwe wakachengeteka.
Kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza UV inki
SIUMAI kurongedza inosvitsa michina yemhando yepamusoro uye maingi emhando yepamusoro kuita kuti zvigadzirwa zvipenye uye zviwedzere kutaridzika.
SIUMAI kurongedza ine akawanda akapfuma ekugadzira masters kuti ave nechokwadi chekuti zvigadzirwa hazvisi nyore kubhura.
SIUMAI kurongedza inosarudza zvemukati zvemhando yepamusoro zvinhu, mukati mechigadzirwa chakajeka, uye mhando yechigadzirwa inovimbiswa.
Isu tinopa proofing masevhisi kuti tive nechokwadi chekuti unogadzira chigadzirwa chakakwana mupfungwa dzako.
Kugamuchirwa kubvunza, email kero:
Zvakapfuura: Color Printing Packaging Chocolate Tea Storage Paper Tube
Zvinotevera: SIUMAI Corrugated shipping mabhokisi tsika kurongedza zipper katoni makadhibhokisi bhokisi
Wholesale Custom Premium Luxury Cardboard Pepa...
Mini Wireless headset bluetooth earphone packag...
Customized Curly Hair Straightener Hair Dryer B...
CD bhokisi bepa rekodhi kavha pepa CD DVD VCD cove ...